Guudmar Warbixin: The Ogaden Situation by Central Intelligence Agency (CIA) on April 07, 1980 | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdifataax Xasan Maxamed 'Barawaani' — August 27, 2020
Warbixin ka kooban 25-bog oo ay diyaarisay hay’adda dhexe ee sirdoonka Maraykanka (Central Intelligence Agency – CIA) ayaan akhriyay. Walow 25-ka bog meelo badan oo xasaasi ah ay qariyeen, haddana nuxurka iyo falanqeytuba waa ay muuqdaan. Goobaha ay qariyeenna, arrimo la xidhiidha siyaasaddooda amni ayaa u qariyeen.
Asalka guud ee khilaafka dhulka Soomaali-Galbeed arrimo waaweyn oo taariikhi ah baa uu salka ku hayaa, waxaana ka mid ah: 1) Halgan adag oo qarniyo socday una dhexeeyay dadka Kiristaanka buuraleyda ah iyo Muslimiinta dhulka hoose ee Geeska Afrika. Sida oo kale in la xidhiidho dawlad Afrikaan oo ilaashanaysa/dhawraysa mabdaa’ida iyo xeerarka madaxbannaanideeda dhuleed (Ethiopia) iyo Qaran kale oo Afrikaan ah oo goonidiisa isu taagay, dhulka Ogaadeeniyana u tixgelinaya shuqul gumeyste (Colonial Issue).
Sawirkaan waa Xabsiga Jeel Ogaadeen wuxuu ku yaallaa magalada Jigjiga, wuxuuna ku fadhiyaa dhul weyn waxaana ku wareegsan darbi aad u dheer oo salig lagu wareejiyey. Albaabka hore ee laga soo galayo inkasta oo uu ku qoran yahay Xabsiga Dhexe ee Deegaanka Soomalida haddana xabsiga wuxuu ku soo caan baxay oo loo yaqaanna ‘Jeel Ogaadeen’.
Sidaas oo kale istiraatiijiyad ahaan, duullaanka ay dawladda Soomaaliya ku qaadday Ogaadeeniya, ayaa waxa u sabab ahaa xukuumaddii hore ee Itoobbiya oo dhacday (Xayle Salaase), ayna timid xukuumad kacaan oo cusub (Mengiste). Haddaba, daciifnimdaas darteed ay fududdahay in laga faa’iidaysto. Ta kale, waa in aanay keliya Itoobbiya ku furnayn xiisadda kacdoon ee Soomaali-Galbeed, balse sidaas oo kale xiisad kale ay kaga furantahay Eritrea.
Dhanka kale, millateriga Itoobbiya aad baa uu u daciifay, sababo badan awgood dhanka Ogaadeeniya iyo Eritrea, mooraal ahaan iyo in kaalmadii Maraykanku joogsatay bishii Abriil, 1977. Gen. Maxamed S. Barre, si kalena waa uu isu tusiyay wax, oo waxa uu damacsanaa haddii dagaal kaga adkaado, waaba uu kaga adkaan doonaaye, in Itoobbiya ay rabitaankiisa yeeli doonto. Dhulkaasna ay u oggolaan doonto.
Horraantii June 1977 ka dib markii ay jabhaddii WSLF (Western Somali Liberation Front) ay ku jiraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed (SNA) ay gooyeen biriishkii isku xidhayay tareenka Itoobbiya iyo Djibouti, in kasta oo ay is tuurtuur dagaal socdeen. Ayaa haddana dhammaadkii bishii July 1977 ay ciidamada SNA iyo WSLF dagaal toos ah ku bilaabeen Ogaadeeniya. Muddo laba bilood ah ayaa ay gebi ahaanba dhulka Soomaali-Galbeed badankiisii ku qabsadeen.
Ta kale, waa in ay adkayd, ayna fogeydna kaalmada ciidamada Soomaaliya, sida wax lagu soo gaadhsiiyaana ay adkeyd. Arrintaaas oo Itoobbiya ka caawisay in ay xooggeedii si degdeg u dhisto. Waxa soo raaca middaas in Soomaaliya ay dayactiri kari wayday qalabkeedii dagaalka iyo ciidankeediiba, sababta oo ah Noofembar 1977, waxa go’ay gebi ahaanba xidhiidhkii dibadda ee ay la lahayd Midowgii Soofiyeeti.
Sidaa darteed Soofiyeetku waxa damcay in labada dhinacba uu millateri ahaanba taageere u fidiyo. Gen. Maxamed Siyaad Barre dheg jalaq uma siinin Soofiyeetka oo xilligaas rabay in uu arrinta labada Dal isku hayaan uu dhexgalo, ama si kooban kuma uu qancin sida Soofiyeetku rabo.
Ugu dambeyn warbixintani waxa ay inta dambe ka hadlaysaa sidii ciidamada Soomaaliya ay uga soo baxeen dhulka Ogaadeeniya, xaaladihhii ku hareeraysnaa ee Soofiyeetka iyo Kuuba. Sida oo kale jahbaddii WSLF iyo arrimo badan oo la xidhiidha. Jahbadihii kale ee bilaabmay sida SSF (SSDF) oo soo raacday Itoobbiya, ka dib kolkii dagaalkii laga soo noqday oo weli sii qoyanyahay. Qeybta ugu dambeysana waaxa ay ka warramaysaa danta Maraykanka iyo saadaalinta ay hay’addu ku sameysay xaaladdaas.
Tags: 1980Guudmar Warbixin: The Ogaden Situation by Central Intelligence Agency (CIA) on April 07
Next post Xidhiidhka Talyaaniga: Sidee Ayay Rooma Uga Qeybqaadatay Burburkii Soomaaliya?
Previous post Kaalinta Duqeyda Dhaqanka ee Nabad-dhiska Soomaaliya